Ahmiyada Salaada - QuraanKa MacnihiiSa Afka SoomaaLiGa
Halkan waxaa mudan inaan xusno, in markii hore lagu waajibiyay oo loo soo dhiibay Rasuulka (scw) 50 salaadood, hase ahaatee wuxuu la kulmay Nebi Muse (cs), isagoo kula taliyay inuu u laabto xagga Alle (sw), uuna weydiisto inuu ka khafiifiyo tirada salaadaha, maadaama uu isagu soo arkay qoomkiisii reer Banuu Israa’iil. Sidii ayuu Rasuulka (scw) ugu noqday Eebbe (sw), isagoo sidaas sameeyay dhowr jeer, jeer markii danbe loo soo dhiibay salaado shan, laakiin xagga ajarka ay ka yihiin 50 salaadood oo kale.
Rukniga ama tiirka Salaadda waxaa la waajibiyay 3 sanno kahor waqtigii hijrada. Waana cibaado ay la iman jireen ummadihii naga horeeyay iyo Nebiyadoodaba, sidoo kale ay waajib tahay inay la yimaadaan ummadda Nebi Muxammad (scw).
Meel weyn ayuu islaamka gaarsiiyay ahmiyadda cibaadada salaadda, isagoo digniin iyo gooddi daranna uga digay ciddii ka tagta, ee aan la imaan salaadda. Salaaddu waa saldhiga ugu weyn ee diinta islaamka, waa furaha Jannada, dhinaca kale salaaddu acmaasha la qabto ayeey ugu kheyr badan tahay, waana camalka ugu horreeya ee addoonka la weydiin doono maalinta aakhiro.
Nebiyadii hore dushooda nabadgelyo iyo naxariis Eebbe (sw) ha yeelee si goonni ah ayeey u qaddarin jireen ilaalinta salaadda. Matalan, waxaynu qur’aanka ka heli karnaa tusaalooyin fara badan oo arrintan la xiriirta. Matalan waxaynu arkaynaa Nebi Ibraahim (cs) oo ku duceysanaya “Rabbiyow waxaad iga dhigtaa kuwa salaadda ooga, sidoo kale ubadkayga, Rabbiyoow naga aqbal ducadayda” Suuradda Ibraahim lambarka 40.
Sidoo kale, wiilkiisa Ismaaciil (cs) ayuu misna Eebbe (sw) ku ammaanayaa inuu ehelkiisa fari jiray salaadda, wuxuuna yiri “Wuxuu (Ismaaciil) fari jiray reerkiisa salaadda iyo zakada, Rabbi agtiisana wuxuu ahaa mid looga raalli yahay”. Suuradda Maryama aayadda 25.
Markii ugu horeysay ee loo waxyoonayay (Eebbe la hadlayay) Nebi Muse (cs) wuxuu Eebbe (sw) faray inuu oogo salaadda, wuxuuna ku yiri “waan ku doortow (Muusow) ee maqal waxa laguu waxyoonayo, Annigu waxaan ahay Allaha aan anniga mooyee Ilaah kale jirin ee anniga i caabud, salaaddana oog xuskayga” Suuradda Daha aayadaha 14 iyo 15.
Sidaas oo kale ayaan qur’aanka ku arkaynaa dardaarankii addoonkii wanaagsanaa ee Luqmaan, markii uu u dardaarmayay wiilkiisa, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa “wiilkaygayow oog salaadda, macruufkana far (dadka) munkarkana ka reeb (dadka), wixii dhibaato ku soo gaartana u sabar, sidaas ayaa ummuuraha kuwooda loo qasdo”. Suuradda Luqmaan aayadda 17. Nebi Ciise (cs) markii ugu horeysay ee uu hadlay isagoo ku sugan dhabta hooyadii, hadalladii waxyiga ahaa ee uu qur’aanka noo sheegay waxaa ka mid ahaa “waxaa la ii daardaarmay salaadda iyo zakada intaan noolahay”.
Suuradda Maryama aayadda 31. Ugu danbeyntii waxaa Suubbanaha Nebigeena Muaxammad (scw) la faray inuu isna la yimaado salaadda, wuxuuna Alle ku yiri “Akhri (Muxammadow) wixii xaggaaga la waxyooday oo kitaabka ah, salaaddana oog, maxaa yeelay salaadda waxay (dadka ka) reebtaa xummaanta iyo waxa la naco...” Suuradda Al-Cankabuut aayadda 45.
Wuxuu Eebbe (sw) isagoo na faraya inaan ilaalinno salaadaha yiri “xifdiya salaadaha (shanta ah) iyo salaadda dhexe (ee sharafta badan, waana salaadda Casar), una istaaga Eebbe (sw) dartii idinkoo u khushuucsan”. Al-Baqara aayadda 238 iyo 239. Taasna waxaa loola jeedaa, inaan xaalad kasta aan jirno ilaalinno salaadaha faralka ee shanta ah. Ma awoodi wayday inaad istaag ku tukatid, ku tuko fadhi, xittaa haddaad awoodi wayso inaad fadhi ku tukatid, waa inaad u tukataa dhinac-dhinac, ama-ba aad ku tukataa si ishaaro ahaan ah, siday culumada islaamka yiraahdeen oo kale.
Wuxuu Eebbe (sw) isagoo uga digaya kuwaas aanan ilaalin waqtiyada salaadda ku yiri “ halaag waxaa u sugnaaday kuwa tukanaya (ee munaafiqiinta ah), ee haddana halmaansan salaaddooda” Suuradda Al-Maacuun aayadda 4 iyo 5.
Haddii aan dib u milicsanno xagga axaadiista, waxaa hubaal ah inaan arkayno iyadoo uu Rasuulka (scw) ka dhigayo salaadda waxa lagu kala sooco qofka muslimka ah, iyo kan aan ahayn.
Cabdullaahi Binu Cabbaas Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu yiri hadal uu macnahiisu ahaa “labo rakcadood oo si khushuuc leh loo dhammeystiray ayaa waxay ka kheyr badan yihiin dunida iyo waxa saaran”.